အိပ်မက်ထဲက ကချင်မြေ | NEW BURMA MEDIA
December 25, 2011 — newburma
ကချင်ပြည်နယ်ဟာ တောတောင် ရေမြေ သဘာဝအလှတွေ များပြားလှတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်သလို အဖိုးတန် သယံဇာတများလည်း ပေါကြွယ်ဝလှပါတယ်.. ကျွန်မ စာရေးဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ နေရာ အချို့က ကျွန်မရောက် ခဲ့တဲ့ နေရာတွေရဲ့ အကြောင်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေကို ဘလော့ဂ်ပေါ်ကနေ တင်ခဲ့သလောက်လည်း တင်ခဲ့ပြီးပါပြီနော်.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်မဟာ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ နေရာအစုံကို မရောက်နိုင်သေးပါဘူး.. ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ သဘာဝတရားရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ အင်မတန် လှပသာယာတဲ့ အိက်မက်ဆန်ဆန် နေရာလေးတွေ ရှိနေပါသေးတယ်.. ကျွန်မအနေနဲ့ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါ အခွင့်အရေးများရှိခဲ့ရင် အဲဒီနေရာတွေ သွားချင်မိပါသေး တယ်။
ချမ်းယိန်းခူးရဲ့ မိုးရာသီ ( အစိမ်းရောင်တောင်ကုန်းများ…)
ချင်းပြည်နယ်က တောင်တန်းတွေပေါ်မှာလည်း တောင်ဇလပ်ပန်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီပုံကတော့ ကချင်တောင်တန်းပေါ်က တောင်ဇလပ်ပန်းအနီပါ။ ကချင်ပြည်နယ်သူ ကျွန်မ တောင်ဇလပ်ပန်းကို အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသေးပါဘူး. သူကလည်း မြင့်မား တဲ့ တောင်ပေါ်တွေ မှာသာ ပေါက်တာကိုး.. အခါအခွင့် သင့်တဲ့ တစ်နေ့နေ့ တော့ တောင်ဇလပ်ပန်းကို ကြည့်နိုင်ဖို့ ရောက်အောင်လာခဲ့ပါဦးမည်။
ရှစ်ခွင်တိုင်း မှုန်မှိုင်းတဲ့ ပတ်လည်…
မယုံမရှိပါနဲ့… တကယ်ကို မြန်မာပြည်ထဲမှာပါ.. ဓမ္မာရုံနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတည်ရှိရာ တောင်ကုန်းပါ။
ယခုအခြေအနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၇ဝဝက ရှိခဲ့တဲ့ အခြေအနေနဲ့ ဘာတွေများ ကွာခြားပြီး ဘာတွေများ တိုးတက်လာသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါဘဲ။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကရော ယခင်ကနဲ့ ဘာများ ကွာခြားသွားခဲ့ပြီလဲ ဆိုတာပါဘဲ။
ဘယ်လိုပင်လမ်းပန်းခက်ခဲပါစေ.. တောတောင်တွေကြားက သဘာဝအလှတရားက မြို့ပြရှုခင်းတွေ ဘယ်လိုမှမမီနိုင်အောင် လှမြဲပါဘဲလေ။
ရေခဲတောင်ထွတ်များနဲ့တောင်ခြေက သူတို့ဘဝ (သူတို့လို ရောင့်ရဲနိုင်ပါ့မလား)
ဖြူလွလွ ရေခဲဖုံးတောင်နဲ့ တောင်ပေါ်ရွာ
အီမောဘွမ်း အနောက်ဖက်တောင်တန်းများရှိ ဆောလော်မြို့နယ်ထဲက “ကူးမောရွာ”
ဖီမော်ရဲ့နှင်းတွေဝေတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ (တရုတ်မြန်မာ နယ်ခြားဂိတ်)
ဆရာ့ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အရင်က မသိခဲ့တဲ့ ကချင်ဒေသရဲ့ သမိုင်းကြောင်းအချို့လည်း သိလာခဲ့ရတယ်။ နယ်စပ်မျဉ်းနဲ့ ကပ်နေတဲ့ ကချင်ရွာကြီး သုံးရွာဟာ ( ယခင်က မြန်မာပြည်ပိုင်နက် စင်စစ် ဧကန်ဖြစ်ပါရက်ကယ်နဲ့) ဟိုးယခင်ခါက ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးရဲ့ လက်ထက်မှာ တရုတ်ပြည်ပိုင်နက်ထဲကို ထည့်ခံလိုက်ရတယ် ဆိုတာပါဘဲ။ သိသူများကတော့ သိကြပါရဲ့.. ဒါပေမဲ့ လက်လွန်ကုန်ပါပြီ…း(
ကဗျာတစ်ပုဒ်လို လှတဲ့ တောင်တန်းများ
ပေ ၇ဝဝဝ ကျော် အမြင့်မှာရှိတဲ့ ဘောလုံးကွင်းလို့ ဆိုပါတယ်.. ကြည့်ပါဦးတော့… တိမ်ကိုတောင် လှမ်းပြီး ဆွတ်ခူးလို့ ရတော့မဲ့အတိုင်း
(ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်မှာ ဘောလုံးကန်လိုသူများ စာရင်းပေးပါ) တောင်ထိပ်ပေါ်ကို ခြေလျှင် တက်ပြီးမှ ဘောလုံးကန်ရပါမယ်… 😛
တရုပ်နဲ့ မြန်မာဆက်သွယ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ ကန်ပိုက်တည်လမ်းပေါ့။ သူတို့တွေက ဒီလမ်းကနေ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေကို ကားကြီးကားငယ်နဲ့ သယ်ဆောင်လာပြီး လုပ်သားတွေနဲ့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လေ
“စန်းကျားဟော်” ချောင်းသုံးခွဆုံ စခန်းထောက်ရွာ ( ဒီလိုကြိုးတံတားတွေ လျှောက်ရဲပါ့မလား)
တောင်ပေါ်ဆေးခန်းလေးတစ်ခုရဲ့ ပုံပါ (ဆေးခန်းဆိုပေမဲ့ ဆရာဝန်မရှိတာ ၈နှစ်ရှိပြီလို့ ဆရာငြိမ်းအေးအိမ်က ဆိုပါတယ်)
တောင်ထိပ်ပေါ်က ရွာကလေးဆီသို့ သွားရာလမ်း..
ငေါ့ချမ်းခ မြစ်ဘေးက ရွာကလေး ( ဒီနေရာဟာ ကျောက်ခေတ်ကတည်းက စပါးပင်တွေရဲ့ မူလဇာတိလို့ ယူဆနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေရှိနေတယ်လို့ ဆရာက ဆို)
တောမီးကို ငြိမ်းသလို စစ်မီးကိုလည်း ငြိမ်းကြစို့…
Yak လို့ခေါ်တဲ့ တိဘက်နွားပါ။
နွားနောက်နဲ့ တိဘက်နွားရဲ့ ကွာခြားချက်က အမွှေးရှည်တာနဲ့ မရှည်တာ ကွာခြားပြီး ဦးချိုလည်း ကွဲပါတယ်။ တိဘက်နွားဟာ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဒီကချင်တောင်ပေါ်မှာဘဲ ရှိဟန်တူပါတယ်.။
မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော တိဗက်နွား(YAK) မွေးမြူရေးခြံ။
ဥာဏ်သိပ်ကောင်းတဲ့ကောင်တွေ၊ ဘယ်လောက် အဝေးရောက် နေအောင် တောင်ကြောတစ်လျှောက်သွားနေသွားနေ ညနေညနေဆို အိမ်ရောက်အောင်ပြန်တတ်တယ်။ သစ်မြစ်ဆုံတွေပေါ်မှာလည်း ငြိမ်နေအောင် ဟန်ချက်ထိမ်းနေတတ်ကြတယ်။ (ဆရာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ပြန်ကူးပေးလိုက်တာပါ)
ဒီနေရာကတော့ အပေါ်က နွားတွေရဲ့ စားကျက် မြက်ခင်းဖြစ်ပါတယ်. အေးအေးချမ်းချမ်း သာသာယာယာပင်ရှိသေးတော့တယ်။
ဒီအကောင်လေးက ရှားပါးလှတဲ့ပန်ဒါဝက်ဝံအနီမျိုးလို့ ဆိုပါတယ်.. သူ့နာမည်လေးက နိုဝင်ဘာတဲ့ ဆရာ့အိမ်မှာတစ်နှစ်လောက် မွေးထားပြီး နောက်တော့ တောထဲပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ ဆရာက ပြောပါတယ်။
ဆရာရေ.. နိုဝင်ဘာလေး ခုချိန်ထိ ဘေးရန်ကင်းကင်းနဲ့မှ ရှိသေးရဲ့လား မသိဘူးနော်.. လောဘကြီးပြီး သားစားကျူးလှတဲ့ တစ်ဖက်နိုင်ငံက မုဆိုးတွေကြောင့်များ ပျောက်ဆုံးသွားလေပြီလားလို့ တွေးမိပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါသေးတယ်။
တောင်ပေါ်မှာ ပေါလှတဲ့ ချဉ်စော်ခါးသီးပင်ပေါ့
ရာချီပြီး ရှိတဲ့ ဆရာရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ အားလုံးကို ကျွန်မအနေနဲ့ တင်ပေးချင်ပေမဲ့ မဖြစ်နို်င်ကြောင့် အတူ ဓာတ်ပုံများ အားလုံးကို slide show လေးဖန်တီးထားပါတယ်.. လှပသာယာတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို အယ်လ်ဆိုင်းဇီရဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ပေါင်းစပ် ဖန်တီးထားတာမို့ အချိန်လည်းရမယ် စိတ်လည်း ဝင်စားတယ် ဆိုရင် အားပေး ကြည့်ရှုသွားပါဦးလို့နော်။
မိတ်ဆွေငယ်သူချင်းများ အားလုံးလည်း အေးချမ်းသာယာတဲ့ ကချင်မြေရဲ့ အလှတွေကို တွေ့မြင်ကြပြီ ထင်ပါတယ်နော်.. တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ခရီး သွားလာဖို့ ကောင်းတဲ့ ဒေသတွေ၊ အင်မတန်မှ သာယာတဲ့နေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်. အခုမြင်နေရတဲ့ နေရာတွေဟာ ပြည်ပခရီးသွားတွေ မပြောနဲ့ ပြည်တွင်းက လူတွေတောင် ရောက်ဖူးဖို့ မလွယ်သေးတဲ့ နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်.။ သွားဖို့ လာဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ဒီနေရာက အလှတွေဟာ လူသူမသိဘဲ ရှိနေခဲ့ရတာပါ။ အိမ်မက်ဆန်ဆန် လှပလွန်းတဲ့ ဒီဒေသရဲ့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကို ချောမွေ့အောင် လုပ်မယ်၊ နယ်မြေအေးချမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်မယ်၊ ဆောက်သင့်တဲ့ အဆောက်အဦး၊ ဧည့်သည်တွေတည်းခိုဖို့ တည်းခိုခန်း စသည်တို့ ကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ဆည်းမယ် ဆိုရင် ဒီလို သာယာ လှပတဲ့ နေရာတွေကို လာချင်၊ သွားချင်ကြတဲ့ သူတွေ အများကြီး ဖြစ်မှာပါ။ ပြည်တွင်းက သာမက ပြည်ပ ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေပါ အလည်လာ၊ အပန်းဖြေချင်အောင် ဆွဲဆောင်ဖို့ ကောင်းတဲ့ နေရာတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ.. ဝေးဝေးကို မကြည့်ပါနဲ့ .. ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာတင် အဖိုးတန်အလှအပများ ရှိနေပါတယ်..
တောင်တွေကြားက အင်မတန် လှပတဲ့ သာယာတဲ့ ချီဖွေချောင်းကလေးပါ။
ချီဖွေတံတား (သို့) ဇန်နောင်ယန် ကြိုးတံတား.
အစိမ်းရောင် ဆေးစက်များပေါ်က အနက်ရောင်ဆေးစက်များ
ဒါကတော့ အထက်က နေရာကိုဘဲ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့.. ခုလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ ဒီတံတား ၂စင်းစလုံး အပေါ်မှာ မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်း တစ်စင်းမှ မရှိနိုင်တော့လေပြီ။
ဒီတံတား ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်.. သဘာဝ အလှ အပတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းလှပပြီး သာယာလှတဲ့ ကချင်မြေဟာ မငြိမ်းချမ်းလေသော အကြောင်းတရား များကြောင့် အခုလို ဖြစ်ရတာတွေဟာ ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်း ပါတယ်. လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးလည်း ခက်ခဲ၊ ငြိမ်းချမ်းမှု လည်း မရှိရင် အင်မတန် သာယာလှပတဲ့ အလှတွေကို ဘယ်သူကမှ အလွယ် တကူ မြင်တွေ့ခွင့် ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သာယာလှပပြီး သဘာဝရဲ့ အငွေ့အသက်တွေနဲ့ အေးချမ်းလွန်းတဲ့ ဒီမြေပေါ်မှာ ယမ်းနံ့တွေ၊ သွေးညှီနံ့တွေ အမြန်ဆုံး ကင်းစင်လွင့်ပြယ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ချိုးငှက်ကလေးတွေ ဝဲပျံနေတာကို တွေ့မြင်ချင်မိပါပြီ။
ကလေးတို့ရေ.. မင်းတို့ရဲ့ အနာဂတ်လေး လှပ သာယာပါစေ…….
ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ ပိုင်ရှင် ဆရာငြိမ်းအေးအိမ်ကလည်း ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဒီလောက် သာယာတဲ့နေရာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာက မြန်မာပြည်တင်မက ကမ္ဘာကပါ သိစေချင်တယ်.. လာလည်စေချင် ပါတယ်လို့ ပြောပါ တယ်။ ဒေသကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ ဆရာ့ရဲ့ စေတနာတွေကို အထင် အရှား မြင်တွေ့လိုက်ရလို့ ဆရာ့ ကို လေးစား မိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဆရာ့ရဲ့ စေတနာတွေ အတွက်လည်း အထူးကျေးဇူး တင်ပါကြောင်း ပြောကြား ပါရစေရှင်.. အေးချမ်းလှပတဲ့ ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည် နယ်မှာ တောက်လောင်နေ တဲ့ စစ်မီးတွေ၊ အမုန်းမီးတွေ အမြန်ဆုံး ငြိမ်းအေးပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။အဲဒီဒေသ ဒီပိုစ့်ထဲက ဓာတ်ပုံများ အားလုံးဟာ ဆရာ ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံများဖြစ်သောကြောင့် အခြားသော မီဒီယာများမှ ကူးယူဖော်ပြ အသုံးပြုလိုပါက ဆရာ့ထံ ဆက်သွယ် ခွင့်တောင်းပြီးမှသာ အသုံးပြု ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ ဆရာရဲ့ ဖေ့ဘွတ်မှာလည်း ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100001441728322) လှပသော ဓာတ်ပုံများကို သွားရောက် ကြည့်ရှု ခံစားနိုင် ပါတယ်ရှင်…
ချစ်သော ကချင်မြေ ထာဝရငြိမ်းချမ်း စိမ်းလန်းပါစေ.. အားလုံးလည်း ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်း စိတ်ရွှင် လန်းသော နေ့ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ..
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
« 국명 버마
ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ အမှာစာ…………………. »